QM oo ka jawaabtay Dacwad ay gudbisay Somaliland | Berberanews.com
Home WARARKA QM oo ka jawaabtay Dacwad ay gudbisay Somaliland
Hargeysa(Berberanews)-Warqad qoraal ah oo la sheegay in Ergayga QM kaga jawaab celiyey dacwad uu u qoray Madaxweynaha Somaliland, ayuu ku sheegay in Xoghayaha guud ee QM uu soo jeediyey in colaada deegaanka Tukaraq lagu dhameeyo wada hadal iyo in dib loo bilaabo wadahadalladii u dhexeeyey Somaliland iyo Soomaliya.
Danjire Michael Keating ayaa sheegay in xoghayaha guud ee qaramada midoobay u wakiishay inuu ka jawaabo dacwada ka soo gaadhay madaxweynaha somaliland,
Qoraalka Jawaab celinta ah, ayaa u dhigay sidan:-
“Xoghayaha guud wuxuu iga codsaday inaan kaaga soo jawaabo warqadaadii 28 May 2018 ee la xidhiidhay colaadda Tukaraq.
Xoghayaha guud waxa uu ka niyadjabsan yahay, xilli horukac la taaban karo laga sameeyey geeddi socodka nabadaynta iyo dhismaha dawladnimada Soomaalida, in ilihii milateri ee yaraa, qiimahana lahaa, halkii ay ka ahayd in loo isticmaalo wax-ka-qabashada amni darrada, in loo isticmaalay khilaaf sababaya darxumo weyn iyo in nafo lagu waayo. Wuxuu ugu baaqayaa dhammaan dhinacyada in la fuliyo afartii qodob ee aan kula wadaagay oo ay ku jireen in colaadda la joojiyo, xabad joojin la hirgeliyo, la aasaaso janalo ay ku xidhiidhaan taliyayaasha ciidamadu, iyadoo si buuxda loo ogolaanayo in caawimo bini-aadminimo la gaadhsiiyo dadka shacabka ah ee ay saamaysay iyo in maxaabiista la sii daayo si kalsooni loo dhiso.”
Arrinta la xidhiidha mawduuca mawiqfka Somaliland, xoghayaha guud wuxuu ku talinayaa inay jiraan qaabab caalami ah oo loo dejiyayinay raacaan deegaanada doonaya inay gaadhaan aayo ka tashi oo ay aqoonsadaan dalalka beesha caalamku kana mid noqda Qaramada Midoobay. Xoghayaha guud wuxuu ugu baaqayaa Somaliland inay dib u bilowdo wada hadaladii istaagay ee Somaliya.
Xoghayaha guud wuxuu I faray inaan sii wado inaan dhinacyada kala shaqeeyo in la dhammeeyo colaadda tukaraq iyo inaan fududeeyo dib u bilaabista wada hadalada Somaliland iyo Soomaaliya.”.
Khilaafka u dhexeeya Somaliland iyo Soomaaliya ayaa xoogaystay bilihii u dambeeyey, kaddib markii ay labada dhinac eeddeymo kulul hawada isu mariyeen.
Somaliland ayaa ku eeddeysay dawladda Madaxweyne Farmaajo Dagaalka ka dhacay Tukaraq.
Previous article“Somalia hawo ay la wareegtay ma jirto” Maareeyaha Madaarrada Somaliland
Next articleTaliyaha Ciidammada Qaranka Somaliland oo kormeeray Tuka-raq